आषाढ ०८, २०७८ २०:४३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सुदर्शन स्मृति स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार एपी वान टेलिभिजनकी स्वास्थ्य पत्रकार सुजिता पौडेललाई प्रदान गरिएको छ । प्रस्तावित सुदर्शन देवकोटा स्मृति प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालसंगको सहकार्यमा उक्त पुरस्कार स्थापना गरेको हो । पुरस्कारको राशी ३० हजार रुपैयाँ छ ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा दिवंगत देवकोटाकी छोरी डा. सुधा देवकोटाले उक्त पुरस्कार पत्रकार पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । सो अवसरमा डा. देवकोटाले आफ्नो बाबाले लामो समय पत्रकारितामा बिताएको र बाबाकै कारणले पत्रकारिताको महत्व आफूले राम्रोसंग बुझेकोले बाबाको मार्गमा आफू कुनै रुपमा जोडिऔँ भनेर पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरेको बताउनुभयो ।
‘मेरो बाबाले पत्रकारिता सम्मानित पेशा हो भनेर हामीलाई बुझाउनु भयो । बाबाका हामी सबै सन्ततीले पत्रकारिताको महत्व बुझेका छौँ । अझ् स्वास्थ्य पत्रकारिता त झनै सम्वेदनशील विषय भयो । त्यसैले स्वास्थ्य पत्रकारहरुसंग सहकार्य गर्दै बाबाको स्मृतिलाई ताजा गराउन चाहन्छौँ । आज चौधौ स्मृति दिवसमा हामीले पुरस्कार प्रदान गर्न सफल भयौं । र अक्षयकोषमार्फत यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले प्रस्तावित सुदर्शन देवकोटा स्मृति फाउन्डेशनले स्वास्थ्य पत्रकारहरुको सम्मानका लागि सहकार्य गर्ने अवसर पाउँदा खुशी लागेको बताउनुभयो । उहाँले मञ्च र प्रतिष्ठान मिलेर भविस्यमा पनि स्वास्थ्य पत्रकारहरुको हित र क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रममा हातेमालो गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ पत्रकार उमेश चौहानले स्वर्गीय सुदर्शन देवकोटाको पत्रकारिता यात्राको चर्चा गर्दै पत्रकारिता सम्मानित र गर्व गर्न लायक पेशा हो है भनेर आफ्ना सन्ततीलाई छाप छोड्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ (सुदर्शन) को छोरा छोरी अहिले अर्कै पेशामा हुनुहुन्छ तर आफ्नो स्वर्गीय बाबुको पत्रकारिताका प्रेरणादायी कुरा, प्रशंग र प्रशंसा यति गर्नु हुन्छ कि, यसले पत्रकारिता क्षेत्र सम्मानित र गर्व गर्न लायक पेशा हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । बाबाको नाममा प्रतिष्ठान खोल्ने, पत्रकारिता पुरस्कारका लागि अक्षयकोष निर्माण गर्ने, पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्ने सन्ततीहरुको कार्यले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । हामी नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरुले उहाँबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नु छ ।’ उहाँले मञ्चसंगको सहकार्यमा स्थापित पुरस्कारले स्वास्थ्य पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन र हौसला मिल्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रम प्रतिष्ठानका तर्फबाट कपिल घिमिरे, मञ्चका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष कल्पना आचार्य र पुरस्कृत पत्रकार सुजिता पौडेलले आफ्ना धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण तेजकुमार बास्तोलाले गर्नुभएको थियो ।